क्याड एक्सप्लोरर, गुगल र जिफुमाडासमा CAD फाईलहरूसँग खोजी र बदल्नुहोस्
पहिलो हेराईमा यो AutoCAD को लागि आईट्यून्स जस्तो देखिन्छ। यो होईन, तर यो उपकरण जस्तो लाग्दछ यो विचारको साथ सिर्जना गरिएको यस रचनात्मक र कार्यक्षमता जस्तै गुगलको साथ।
CadExplorer एउटा अनुप्रयोग हो जसले AutoCAD फाईलहरू (dwg) सँग डेटा व्यवस्थापन गर्दछ र पनि Microstation (dgn)। Axiom, जो कम्पनीले विकास गरेको छ यो अन्य कार्यक्रमहरू छन्, तर हेरौं के मैले मेरो ध्यान राखेको छ:
यो नक्सा खोजी इञ्जिन हो
हामी जीमेलमा खोज्न प्रयोग गर्दैछौँ Google शैली, हामी थाहा छैन कि कहाँ मेल छ तर हामी केहि शब्दहरू सम्झन्छौं, हामी लेख्दछौँ र हामीसँग पहिल्यै नै इमेलहरूको सूची छ जुन हामीले आवश्यक पर्दछ।
ठीक छ, यस सरलताको तर्कमा, CadExplorer का साथ तपाईं एउटा ट्याबुलर डिस्प्ले र फाईलहरूको काररोसलको रूपमा, थम्बनेलको रूपमा अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। यसले dwg र dgn फाईलहरूसँग पनि काम गर्दछ, यस समीक्षाको उद्देश्यको लागि मैले प्यारेन्थेसिसहरूमा माइक्रोस्टेशन प्रयोगकर्ताहरूको लागि बराबर नाम राख्दै छु।
इकाई जहाँ भण्डारण गरिन्छ
कति लेआउटहरू (मोडेलहरू) छ
कति तहहरू (स्तर)
प्रत्येक नक्सामा कति तत्वहरू छन्?
तपाईले जान्न सक्नुहुनेछ कुन dwg / dgn ढाँचामा यो बचत गरिएको छ र कुन मितिमा यो परिमार्जन गरिएको थियो। उत्तम, त्यसपछि तपाईं स्तम्भ हेडर द्वारा क्रमबद्ध गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रदर्शन बाहेक, एक खास खोज एक वा धेरै फाइलहरूको लागि गर्न सकिन्छ जुन सर्त पूरा गर्दछ, उदाहरणका लागि ती ती हुन् जुन dwg संस्करण २०० format ढाँचामा छन्; भित्र धेरै वस्तुहरू छन् कि फाइलहरू, जो अधिक जो तौल गर्न को लागी; ती ११ मार्च र मार्च २ 2007, २००,, आदि बीच परिमार्जन गरिएका थिए।
यसबाहेक, क्याड एक्स्पप्लरले चीजहरूको फाईल भित्र खोजी गर्न सक्दछ जस्तै:
ब्लकहरू (कक्षहरू), यदि तपाईं जान्न चाहानुहुन्छ कि 35 फाईलहरूमा "बिस्तार" नामक फर्नीचरको कति टुक्रा अवस्थित छ।
पाठ, जस्तै एक विशिष्ट क्याडास्ट्रा कोड खोज्न को लागी मामला।
ज्यामिति जस्तै सर्कलहरू, रेखाहरू वा सीमाहरू (जस्तैआकार) फिल्टर प्रकार जस्तै लाइन प्रकार, मोटाई, रङ, तह (स्तर), आदि
खोजी केवल नाममा आधारित छैन, तर वर्णन, विशेषताहरू वा लेबलहरू जस्तै ब्लकहरू, बाह्य सन्दर्भहरू र लेआउटहरूको रूपमा (मोडेलहरू).
एकपटक ब्याजको वस्तु फेला परेको बेला, यो वस्तुको पूर्वावलोकनमा पूर्वावलोकन गर्न सम्भव छ। त्यसोभए तपाईं फाईल पनि खोल्न सक्नुहुनेछ, अवतरणको लागी AutoCAD वा Microstation।
यो खोज वा ट्याब्लेट डिस्प्ले रिपोर्टको रूपमा उत्पन्न गर्न सकिन्छ, एक्सेलमा पठाएको वा स्मार्टभिटको रूपमा सुरक्षित गरिएको छ, एक-क्लिक क्वेरीका लागि भण्डारण गरिएको एक किसिमको खोजी।
उहाँ एक सम्पादक हुनुहुन्छ
कल्पना गर्नुहोस् कि विनिर्देशहरूले भन्छ कि अक्षहरू "axes" भन्ने स्तरमा जान्छन्, रातो र color र मोटाई ०.०११ र अक्षहरूको लेबलि text पाठ १.२0.001 को साइजको साथ एरियल हुनै पर्छ। हामीसँग एउटा प्रोजेक्ट छ जसमा हामीले कामलाई files 1.25 फाईलमा विभाजित गरेका छौं, जस मध्ये केहीको त्यो स्तर हुन्छ, अरूलाई हैन, पाठहरू ती सर्तहरूमा हुन सक्छ तर हामीलाई थाहा छैन र सम्भवतः धेरैलाई प्रमाणिकरण र / वा समायोजनको आवश्यक छ।
क्याड एक्सप्लोरर केवल त्यसका लागि बनाईन्छ, क्याड फाईलहरूमा व्यापक परिवर्तनहरू गर्दछ। यो गुणवत्ता नियन्त्रण गर्न राम्रो छ, केवल "axes" भन्ने तह चयन गरेर, तपाईं एकै पटकमा सबै फाइलहरूमा परिवर्तन लागू गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाइँ पनि पाठ खोजी गर्न र प्रतिस्थापन गर्न वा कन्टेन्टेसन तार वा नियमित अभिव्यक्तिको आधारमा गर्न सक्नुहुन्छ। मापदण्डहरूको उल्लंघनको समस्याहरू समाधान गर्न वास्तवमै ठूलो समाधान (CAD- मानकहरू)
एक उत्तम उपकरण, पक्कै पनि। राम्रो देखी बाहेक, CadExplorer को कार्यक्षमता धेरै व्यावहारिक देखिन्छ। सुरुमा मलाई यो माइक्रोस्टेशन फाइलहरूको लागि हेरेको याद आउँछ, तर अब यसले तिनीहरूको संस्करणलाई ध्यान नदिई AutoCAD फाइलहरूको लागि समान काम गर्दछ। विन्डोज on मा पछिल्लो संस्करण runs7बिटको लागि समावेश गरिएको छ।
थप जानकारीको लागि तपाईं वेबसाइटको सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ Axiomवा तिनीहरूलाई पछ्याउनुहोस् फेसबुक मार्फत किनकि समय समयमा उनीहरूले अनलाइन प्रदर्शन गर्छन्।
अघिल्लो पोस्ट«पछिल्लो CAD को जीआईएस नजिकिंदै | GeoInformatics मार्च 2011
अर्को पोस्ट डिजाईनरको कम्प्यान, सिभिल थ्रीडीको लागि उत्कृष्ट पूरकअर्को »